အာဒံကို Brody နဲ့လေတန် Meester, ရိုင်ယန် Gosling နှင့်အီဗာ Mende ... : ဤအကြယ်ပွနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်သတ်မှတ်နီးပါးဘယ်တော့မှ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် "အာဒံ Brody နဲ့လေတန် Meester, ရိုင်ယန် Gosling နှင့်အီဗာ Mende ... : ဤအကြယ်ပွနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်သတ်မှတ်နီးပါးဘယ်တော့မှ
အာဒံကို Brody နဲ့လေတန် Meester, ရိုင်ယန် Gosling နှင့်အီဗာ Mende ... : ဤအကြယ်ပွနေတဲ့ဓာတ်ပုံကိုအပေါ်သတ်မှတ်နီးပါးဘယ်တော့မှ
သူတို့ကစုံတွဲတစ်တွဲကိုသူတို့ကိုချစ်ပြီးသေးအများပြည်သူအတွက်သူတို့တစ်တွေဓာတ်ပုံအတူတူပေါ်လာနီးပါးဘယ်တော့မှတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်အများအပြားကြယ်စုံတွဲများနှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး၏ဥပမာအမှုဖြစ်သကဲ့သို့တစ်ခါတစ်ရံအရာတင်းကျပ်သော privacy ကို၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းထားနိုင်တယ် နာတာလီ Portmanသို့သျောလညျးကိုတရားဝင်ပြင်သစ် Choreographer မှလက်ထပ်ခဲ့ 2012 ဗင်္ယာမိန်အမျိုး Millepied။ အခွားသောအချိန်များ, အနည်းဆုံးတစ်စုံပေါ်လာဖို့ဒီအလိုဆန္ဒအတက်အကျနဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ ဒါဟာခြောမှုလူရွှင်တော်ဖြစ်ပါသည် ရိုင်ယန် Gosling et အီဗာ Mende အဘယ်သူသည်ရိုက်ကူးရေးအပေါ် 2011 အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဆိုပါထင်းရူးကျော်လွန်ရာအရပ်ကို.
အဆိုပါငြင်းပယ်မှာလည်းလွန်လွန်းထိတွေ့မှုကလူကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အတူတကွပေါ်ထွန်းထွက်ဖမ်းမိနီးပါးဘူး။ ဤကဏ္ဍတွင်ကြှနျုပျတို့လညျးမကြာခဏpaparazzésရှာတွေ့ Cameron Diaz နှင့်ဂီတပညာရှင် Benji က Maddenအဘယ်သူသည် kiosk ထိတွေ့အများအပြားအချစ်သီချင်းပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလ 2015 အတွက်အံ့သြစရာများကလက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ အလားတူသဘောထားကိုလည်းသရုပ်ဆောင်တွေရဲ့စုံတွဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် အာဒံကို Brody et လေတန် Meesterတစ်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်ရုပ်ရှင် 2011 အတွက်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လာမည့်တံခါးကို၏ရိုက်ကူးရေးကာလအတွင်းမိမိတို့ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သူကားအဘယ်သူ။ အခြားသူများက, ထိုကဲ့သို့သော Will Smith et သားépouse Jada Pinkett အပြင်အရာ, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမိုင်းပြည်သူ့ဦးစားပေးအဆင့်အတန်းကြယ်များအတွက်ဂရုစိုက်ပုံရသည်။ အတူတူပေါ်လာနီးပါးဘယ်တော့မှတစ်ဦး "ခင်ပွန်း" သို့မဟုတ် "ဇနီး" တွင်အကျဉ်းချုံးဤသို့မကြာခဏဆိုးဆိုးရွားရွား built ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနုပညာရှင်ခိုင်မာအောင်မရခွင့်ပြုပါတယ်။
သို့သော်ဤ discrete စုံတွဲများကူညီပေးနေ privacy ကိုတစ်ခါတစ်ရံရည်မှန်းချက်များများ၏ရှေ့မှောက်၌, ကံကောင်းထောက်မစွာသည်ငါတို့အဘို့, လက်မှရ။ အလိုလိုကသတင်းထောက်များကို၏ဗူးတစ်ပျော့လက်ရောက်ရှိရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးကပ်ထင်ရှားနေသည် facing တစ်ဦးကို သိ. ကြည့်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအဲဒီအလွန်ရင်းနှီးသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုစုံတွဲ၏မျှော်လင့်ချက်ရတဲ့အရာတွေအုပ်စုခွဲဒုတိယ immortalize ဖို့ဓာတ်ပုံဆရာအကျိုးစီးပွား "သေနတ်သမား" စက်သေနတ် mode ကို ... သင်ကပိုမိုနီးကပ်စွာဆလိုက်ရှိုးအများအပြားဥပမာရှာတှေ့နိုငျအထကျကွံထားပါတယ် ။
Arabella Combet ဒါရိုက်တာလိုက်ရှိုး။
အာဒံကို Brody နဲ့လေတန် Meester, ရိုင်ယန် Gosling နှင့်အီဗာ Mende ... အတူတူဓာတ်ပုံရိုက်နီးပါးဘယ်တော့မှချန်ထားသောကြောင့်ဤရွေ့ကားနာမည်ကြီးတွေ
Jenifer အမ် Pokora, ပျား Aliagas, ရှမွေလသည် Benchetrit ... အဘို့အ5ကြယ်သွန်း
ထင်ရှား: Meghan Markle အသစ်တခုတော်ဝင်စီမံကိန်းကိုနှင့်အတူကိတ် Middleton ကူးယူဘယ်လို